Newsflash: Strategy ka dị mkpa | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 29, 2009 Fraịde, Machị 11, 2016 Adam Obere
N’oge na-adịbeghị anya, ana m anụ ọtụtụ mkparịta ụka gbasara ahịa dị ka ỌK!! karịa Njikere. Chọsie ike. Ọkụ! Amaara m na mmefu ego na-eme ngwa ngwa na ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enwe ntakịrị obi nkoropụ. Biko biko, mee onwe gị ihe ọma na cheta atumatu n'agha si eme nke ị ji ịnụ ọkụ n'obi na-aga n'ihu.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge, ana m akwado ka ị lọghachite atụmatụ macro gị na ọkwa ụfọdụ. Bụp idemfo mme mbụme nte:
Kedu ihe anyị na-eguzo?
Kedu ndị ahịa, ebee ka ha nọ na ihe ha na-eche?
Nye bụ asọmpi na ihe ha na-ekwu ụbọchị ndị a?
Kedu ihe bụ isi dị mkpa anyị?
Kedu ihe anyị ga - achọ ịdị iche na azụmaahịa anyị n'afọ na - esote?
Nke a ekwesighi iwe ụbọchị ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ awa ma bụrụkwa ọmarịcha schmancy. Naanị mee ya. Ma detuo azịza ha, maka ọdịmma. Ọ bụ ezigbo echiche darned iji mee nke a oge niile. Chee echiche kwa ọnwa.
Mgbe ahụ tụlee atụmatụ micro gị. Kedu usoro ga - ejikọ na atụmanya gị na ndị ahịa gị n'ụzọ ha ga - enye gị obi ụtọ banyere gị? Olee ot you ui ga-esi ama mgbe i na-eme ihe oma? Ọ nwere ọwa dị mfe ị na-eji akpọrọ ihe nke chọrọ ịmụrụ ụda? Kedụ ka ị ga - esi jikọta ozi gị na ihe nlere gafee ihe aka gị niile?
Ugbu a, gaa n'ihu wee nwee obi ụtọ niile banyere mkpọsa data na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ahụ. Ọ bụrụ na ọ dabara na atụmatụ gị.
Tags: mbọnatụmatụ atụmatụajụjụ ọdịnaya
Sep 29, 2009 na 1:52 PM
Amen! Echere m na ọtụtụ n'ime okwu a abụghị maka ndị na-ere ahịa, n'agbanyeghị… ọ bụ ya na ndị isi ha. Ọ gwụla ma akwụkwọ akụkọ, pịa ntọhapụ, blog post ma ọ bụ ọbụna tweet na-apụ, ọtụtụ ndị isi na-eche na ahịa anaghị arụ ọrụ ha. Ọ bụrụ na ndị isi ndị isi jụrụ ajụjụ azịza nke ngalaba ahia ha ma belata usoro na ọgbụgba ọkụ, ha nwere ike mepụta azụmaahịa ha.
Ọkt 6, 2009 na 12:14 PM
Enweghị usoro ị ga - ejedebe na mmeri mmeri mgbasa ozi… nke anaghị ere ngwaahịa.